सम्भोग गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिलाहरु ? - Namaste Post
सम्भोग गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिलाहरु ?
नमस्ते पोस्ट २०७३, ७ आश्विन शुक्रबार ०५:०१ 0
महिलाहरु सम्भोगको दौरान किन उह’, ‘आह’, ‘आउँच’ को आवाज निकाल्छन् ? यदि यो प्रश्न महिलाहरुलाई सोधियो भने प्रष्ट छ– उनीहरु जवाफ दिन पन्छिनेछन् । यो यस्तो जिज्ञाशा हो जसको उत्तर खोज्न जोसुकैलाई कौतुहलता जागिरहन्छ ।
‘उह’, ‘आह’, ‘आउँच’ सम्भोगका दौरान निस्किने आवाज हो, ‘उह’, ‘आह’, ‘आउँच’को आवाज कतै छुसुक्क सुनिनासाथ जोसुकैले अनुमान गरिहाल्छन्– यो महिलाको सम्भोग गर्दाखेरिको आवाज हो । अधिकांश महिला किन यस्तो आवाज निकाल्छन् ? के यस्तो आवाज आनन्दको अभिव्यक्ति हो या मनोरञ्जनको चरम अवस्था ?
अर्को भाषामा भन्नुपर्दा, एक यस्तो अवस्था जुन बेला मानिस सम्भोगको नशामा बेहोसी भई यस्तो आवाज निकालिरहेको हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ त ? यसको जवाफ खोज्न विज्ञानका धेरै पाटा केलाउन जरुरी छ । वैज्ञानिक र मनोवैज्ञानिकसँग जोडिएका विशेषतालाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गरियो भने मात्र यसको सही जवाफ निस्किन्छ ।